Iyo Apple Watch yakagadzirirwa pfupi uye inokurumidza kupfeka nguva | Ndinobva mac
Apple Watch yakagadzirirwa pfupi uye inokurumidza kupfeka nguva
Ini ndanga ndafunga kunyora chinyorwa ichi ndisati ndatotenga wachi. Uye ndezvekuti John Ive iye nevamwe vakuru vakuru vekambani vakataura nezvazvo zvakanyanya. Apple Watch haina kugadzirirwa isu kuti tiite mabasa atinoita pa iPhone ipapo. Haisi chidzitiro kwaunogona kupindirana nekuverenga nhau kana kutarisa network zvemagariro. Tinogona kupindura kumessage, notices uye nezvimwe zvakanangana nezviitiko, asi hazvina kuitirwa izvo.
Pfungwa ndeyekuti hatifanirwe kunge tichiishandisa kwemaminetsi maviri kana matatu tichienderera mberi tichitsvaga diki diki. Pfungwa ndeyekuita kuti zvinhu zviitwe nenguva, nekukurumidza uye izvo zvinoshanda sechishongedzo kune iyo iPhone. Pasinei nezvose, vamwe vanogadzira uye mamwe eanonyanya kuzivikanwa maapps akagadzira chishandiso chakanyanyisa chavanoedza kuwana kutendeseka kwemushandisi uye voita kuti ibatsire zvikuru. Kukanganisa. Vashandisi havachinje iyo hombe skrini kune diki, isu tinongoishandisa semubatsiri uye semuchina wekupfeka wehutano, wachi, zviziviso uye nezvimwe.
1 Iko kushandiswa chaiko kweApple Watch nhasi
2 Chigadzirwa chehutano nemitambo
Iko kushandiswa chaiko kweApple Watch nhasi
Dai ndanga ndatove nenharo uye nezvakawanda zvekutaura nezvazvo ndisati ndazvitenga, ikozvino zvandave kuyedza uye ndinazvo pachangu ruoko ndinogona kuvimbisa nekusimbisa mazwi angu. Pachave nevashandisi vanoda kuishandisa kuverenga meseji dzese, kuona chats uye Twitter timeline, asi haisi iko kushandiswa kwakakodzera. Nezve izvo, bvisa iyo iPhone pasina kutya uye enda kumberi. Rusununguko, saizi uye unozviponesa kubva pakuva myopic. Unoita nekukurumidza mabasa, kupindura mameseji, kubvunza ruzivo nezve hutano uye kurovedza muviri uye iwe unoigadzirira kuti uende kunodzidzisa.
Mushure mezvose, pfungwa yekupfeka uye smart wachi ichiri patafura. Ndivo vashandisi avo nekushandisa kwavo kwezuva nezuva uye zvavanotaura vari kubatsira makambani kutaura zvavanoda kushandisa zvishandiso izvi uye nei vasingadaro. Kunyangwe maapps akaomesesa uye achibvumira zvakawanda kuti zviitwe paawa, pamwe isu vashandisi hatidi kuzviita. Hazvisi nyore here kubuda kunze kwe iPhone uye kuita zvatinofanira kuita? Iyo zvakare inokurumidza uye inoshanda, chokwadika. Naizvozvo, zvinhu zvakaita seizvi zvinoitwa pane yedu mbozhanhare, uye iyo Apple Watch inogumira kune zvinokurumidza uye zvehutano zvinhu.
Kuonekwa seizvi, pamwe avo vasingatambe zvemitambo vanogona kufunga kuti Apple Watch haina kukosha kana ingori kudhura kudhura. Chokwadi, ndizvo. Kuti uwane zvakazara mairi, uchafanirwa kushandisa ese ayo mashandiro. Kune mamwe mabasa ekushanda nawo uye nezvimwe, asi usatarisira kumwe kushanduka kwekugadzira mune wachi.
Chigadzirwa chehutano nemitambo
Icho chaicho chishongedzo chishandiso chehutano, chevatambi, chemuviri chiitiko etc. Neapp Ini ndinodzidzisa iwe kuti unakirwe neyese kuyerwa kwekudzidzira kwako chero chiitiko kana mutambo uyo uri. Uye kwete chete nemaapple native, ivo vagadziri vakagadzira akawanda emutambo. Uye ane mukurumbira ndee akafanana awakashandisa ne iPhone yako. Runstastic, Nike + Kirabhu uye wandinofarira pane vese: Carrot Fit.
Iyo yekupedzisira inokurudzira iwe kurovedza muviri uchikutuka iwe neimwe nzira. Icon yaro siluetti yemunhu ane mafuta anomiririra mushandisi. Kana iwe ukasasvitsa zvinangwa zvako zvezuva nezuva, zvinokuratidza iyo animation iyo inoshungurudza iyo silhouette. Inomurova nedanda rakapwanyika, anobuda achiedza kusvetuka pasina kubudirira uye uremu nenzira inoshamisa.
Chero mutambo waunoita, kana iwe uchitsvaga yakanaka mita yakanyatsoenderana ne iPhone yako, enda kune Apple Watch Series 2 pasina kuzengurira. Asi ramba uchifunga kuti haisi iyo iPhone kana iyo iPad. Hatisi kutaura nezve mudziyo wekuitira zvinhu, asi pekuona nekudyidzana nekukurumidza. Iwe unenge uchiri kuda iyo iPhone uye iwe uchaiburitsa muhomwe yako zvakada zvakaenzana. Izvo zvinoenderana nekuti unoenderana sei newachi uye maapplication aunoshandisa. Teregiramu inoshanda zvakanaka, asi ini ndinofarira kuverenga uye kupindura pane iyo iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch yakagadzirirwa pfupi uye inokurumidza kupfeka nguva
Apple haizounze iyo iPad Pro 2 muna Gumiguru, kana haifanire
Musi wa Gumiguru 27 Apple ichazivisa mhedzisiro yayo yemari mhedzisiro